Wafdi ka socda IGAD oo goor dhaw gaaray Magaalada Baledweyne (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Wafdi ka socda IGAD oo goor dhaw gaaray Magaalada Baledweyne (Daawo Sawirada)
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Magaalada Baledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, waxaa goor dhaweyd Magaaladaasi gaaray Wafdi ka socda Urur Goboledka IGAD oo maalmahan laga sugaayay Magaalada Baledweyne.
Xubnaha Wafdigaan ayaa waxaa hogaaminaayay Wakiilka IGAD ee arimaha Somaliya Danjire Maxamed Cabdi Afey, waxaana Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Baledweyne ku soo dhaweeyay Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan iyo Saraakiisha ciidamada Amisom.
Wafdiga oo si kooban ula hadlay Warbaahinta ayaa sheegay ujeedka Magaalada Baledweyne ay u yimaadeen inay tahay dar dargelinta dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
Odayaash Dhaqanka reer Hiiraan ayaa lagu wadaa inay kulamo kala duwan la qaataan Wafdigaan ka socda Ururka Goboledka IGAD, iyadoo qorshaha uu yahay in reer Hiiraan laga dhaadhiciyo dar dargelinta dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Sh.dhexe oo Odayaasha reer Hiiraan qaarkood ay diideen kol hore inay ka qayb galaan Shirka Jowhar.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble ayaa lagu wadaa in Wafdigan si gaar ah ay ula kulmaan kana dhaadhiciyaan ka qaybgalka Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe oo hakad ku jira.
Xubnaha IGAD ee maanta gaaray Magaalada Baledweyne, ayaa waxaa ka dhex muuqda General Gabre oo ah Sarkaal Itoobiyaan ah, balse ka mid ah Urur Goboledka IGAD.
Wafdi ka socda Midowga Afrika oo Muqdisho u yimid qiimeynta doorashooyinka (Daawo Sawirro)
Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaare kuxigeenka oo gaaray Kismaayo